Ukuphakamisa abaPhakeli kunye nabaXhasi | Umzi-mveliso wokuPaka wokuPaka weChina
Ukuphakamisa ukupaka kunye nenkqubo yokupaka izithuthiiyimveliso ebalulekileyo kubomi bethu bemihla ngemihla ebangela ukuba indawo yokupaka iimoto iye isiba ncinane. Izixhobo zokupaka ezinamacala amathathu zinokwahlulahlula izixhobo zokupaka ezinemitha-ntathu, izixhobo zokupaka ezinemilo emithathu kunye nezixhobo zokupaka ezinemilinganiselo emithathu, kunye nokusetyenziswa kosapho izixhobo zokupaka ezinemilo emithathu, kwaye ngokupheleleyo izixhobo ezizenzekelayo zokupaka ezinamacala amathathu zinokwahlulahlulwa zibe ziipleyiti ezibini okanye ezizezona zininzi ezizenzekelayo izixhobo zokupaka ezizenzekelayo ezinamacala amathathu, izixhobo zokupaka ezizenzekelayo ezinamacala amathathu kunye nolwakhiwo olukhethekileyo oluzenzekelayo izixhobo zokupaka ezinemilo emithathu.
Ukuphakanyiswa kweMoto ePhambili kwamkela iindlela zokuqhuba ngesanti hydraulic, impompo ye-hydraulic ekhupha uxinzelelo oluphezulu lweoyile ukutyhala isilinda esomeleleyo ukuqhuba ukupakisha imoto phezulu nasezantsi, ukufezekisa injongo yokupaka.Xa ibhodi yokupaka imoto iye kwindawo yokupaka emhlabeni, isithuthi ungangena okanye uphume
I-China Daxlifter Rotary iqonga lokuphakamisa imoto uyilo olukhethekileyo lomboniso wemoto, ubungakanani kunye nomthamo unokwenziwa ngokwesiko lakho. Iplatifomu ejikelezayo yemoto isebenzisa umgangatho ophezulu wokungenisa iimoto ekuqinisekiseni ukuba iqonga lingaqhuba kakuhle kwaye lijikeleze ngesantya esifanayo xa lisebenza.
I-China ezine zePost yokuPaka iMoto yokuPaka yokuPaka ikwinkqubo encinci yokupaka eyaziwayo kwilizwe laseYurophu kunye neevenkile ezi-4. Ukuphakamisa ukupaka yimveliso eyenziwe ngokwesiko elandela iimfuno zethu zabathengi, ke akukho modeli imiselweyo onokuyikhetha. , masazise idatha ethile oyifunayo
Ukuphakamisa ukuPaka okuPakishayo kuphakamisa iindlela zokuqhuba ngesanti kubunzulu baphantsi, impompo ye-hydraulic ekhupha uxinzelelo oluphezulu lweoyile ukutyhala isilinda esomeleleyo ukuqhuba imoto yokupaka phezulu nasezantsi, ukufezekisa injongo yokupaka.Kwibhodi yokupaka iimoto kwindawo yokupaka emhlabeni, isithuthi ungangena okanye uphume.
Ukuposa kwePosi yokuPakisha yenye yezona ndawo zidumileyo zokuphakamisa iimoto kubathengi bethu. Eso sixhobo sokupaka i-valet, esixhotyiswe ngenkqubo yolawulo lombane. Iqhutywa sisikhululo sempompo hydraulic. Olu hlobo lokuphakamisa ilungele imoto elula kunye nemoto enzima.
Zininzi izibonelelo ze ilifti yokupaka iimoto : Izinga eliphezulu lobuchwephesha lobuchwephesha kunye nezoqoqosho Izixhobo zokupaka ezinemilinganiselo emithathu zinendawo enkulu yokupaka. Unyawo oluncinci, luyafumaneka Izixhobo zokupaka ezinemilinganiselo emithathu Izixhobo zokupaka ezinemilinganiselo emithathu (iifoto eziyi-8) Paka zonke iintlobo zezithuthi, ngakumbi iimoto. Nangona kunjalo, utyalo-mali lungaphantsi kwegaraji yokupaka phantsi komhlaba enomthamo ofanayo, ixesha lokwakha lifutshane, ukusetyenziswa kwamandla kuphantsi, kwaye indawo yomgangatho incinci kakhulu kunaleyo yegaraji iphantsi komhlaba. Ukubonakala kulungelelaniswe nesakhiwo, kwaye ulawulo lukulungele. Izixhobo zokupaka ezinamacala amathathu zilungele iindawo zokuthenga, iihotele, izakhiwo zeofisi, kunye neendawo zabakhenkethi. Izixhobo ezininzi azidingi kusebenze ngokukodwa, kwaye zinokugqitywa ngumqhubi yedwa. Izixhobo ezixhasayo ezi-3 ezigqibeleleyo kunye no "luhlaza" okusingqongileyo igalaji enamacala amathathu inendlela efanelekileyo yokukhuseleka, enje ngesixhobo sokuqinisekisa isithintelo, isixhobo sokuqhekeza ngexesha likaxakeka, isixhobo sokuthintela ukuwa ngesiquphe, isixhobo sokukhusela ngaphezulu, isixhobo sokhuselo lokuvuza, ixesha elide kwaye liphezulu kakhulu Isixhobo sokufumanisa imoto njalo njalo. Inkqubo yokufikelela inokugqitywa ngesandla, okanye inokugqitywa ngokuzenzekelayo ngesixhobo sekhompyuter, esishiya indawo eninzi yokuphuhla kunye noyilo. Kuba isithuthi sibaleka kuphela ngesantya esisezantsi ngexesha elifutshane kakhulu ngexesha lokufikelela, ingxolo kunye nokuphelisa kuncinci kakhulu.